ပဋ္ဋိက္ခရား၏ကျိန်စာ | Layma's World
« အလင်း အကြိုက်ဆုံး အဟောင်း ၅ …. »
Soe Htet !, on August 15, 2007 at 3:29 pm said:
အရေးအသား အလွန် ကောင်းပါသည် … ကျေးဇူးပြု၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှ ကုလားဒိန် အား အမွှန်းမတင် စေလိုပါ … အပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်ပါ … သတိပြုမိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
Layma, on August 15, 2007 at 3:37 pm said:
သဉ္ဇာ, on August 15, 2007 at 4:01 pm said:
တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့, on August 15, 2007 at 4:07 pm said:
ဂျယ်ရီ, on August 15, 2007 at 4:33 pm said:
အာ …… မဟုတ်သေးဘူးဗျ ကိုကြီးစိုးထက် ရ ….
ကျနော်ကတော့ ဒီစာမှာ “လူ”တွေကိုပဲ မြင်လိုက်ရတယ် …
“လူမျိုးတွေ ဘာသာတွေ နယ်နိမိတ်တွေ နိုင်ငံတွေ” ဘာမှ မမြင်မိလိုက်ဘူးဗျ …..
ဒီဇာတ်လမ်းကလည်း “လူကို လူလို မမြင်လို့”ဖြစ်လာရတဲ့ ဇာတ်လမ်းပဲလို့ ကျနော် ယူဆတယ် ……
ရိုမီယို ဂျူးလိယက်ကို မီချင်မှ မီလိမ့်မယ် …… ဒါပေမဲ့ ….. သူတို့ အကြောင်းလည်း အစ်ကို သိတာပဲ …..
အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး ……. သူဌေးသမီးနဲ့ ဘော်ဒယ်ကုလားညားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ….. ညားစေဦးတော့ နှစ်ဦးကြည်ဖြူရင် ပြီးတာပါပဲ ……
ကျနော် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပါ ….. ကျနော့်မှာ ရွှေအိမ်စည်လို ရင်နင့်အောင် ချစ်မိတဲ့ တပြည်သူလည်း မရှိပါဘူး … အစ်ကိုပြောတဲ့ ကုလားဒိန်နေရာမှာ ကျနော် ၀င်ခံစားကြည့်မိပါတယ် ….
ချစ်ခြင်းကို ခွဲခံရတာက တစ်ချက် ….. အဆင့်အတန်း လူမျိုး ဘာသာ ကို အခွဲခံရတာက တစ်ချက်နဲ့တင် သူ့မှာ နာကျည်းဖို့ လုံလောက်နေပါပြီ ……
““ကျွန်တော်တို့ချစ်ခြင်းကို “နိုင်ငံအတွက်” ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ခွဲရက်ခဲ့တယ်…..။ ”” ကျနော့်အထင် မမှားရင် ဒီစာရေးသူပေးချင်တဲ့ message က ဒါပါပဲ ……အစ်ကို ဆက်တွေးကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ် ….. ကျနော်တို့ရဲ့ ……..????? မပြောတော့ပါဘူးဗျာ …..
ကမ္ဘာက ရွာကြီးဆိုရင် ရွာသူရွားသားအချင်းချင်း ညားကြတာပဲဗျာ … တခြားဂြိုလ်သားတွေနဲ့ ညားတာမှ မဟုတ်ပဲနော့ ….
ပြောမယ်ဆို ရှည်ဦးမယ်ဗျာ ….ဒါပါပဲ ။ အစ်ကို ရဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်လိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ခံစားမိသလို လေးစားမိပါတယ် …… ကျနော်တို့လည်း အစ်ကို့လိုပါပဲ ……. အစ်ကိုဆီလည်း မကြာမကြာလာလည်ပြီး အစ်ကိုရေးတဲ့စာတွေလည်း ဖတ်နေပါတယ် …… အစ်ကိုတို့ မိသားစုပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးဝမ်းသာမိနေတဲ့သူပါ….. ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ ။
Soe Htet !, on August 15, 2007 at 11:59 pm said:
naing, on August 16, 2007 at 10:12 am said:
BarNyar, on August 16, 2007 at 11:05 am said:
I truly got ur msg sis! 😉
JJ, on August 16, 2007 at 12:28 pm said:
JJ, on August 16, 2007 at 12:30 pm said:
Sorry. I do not know who is ပဋ္ဋိက္ခရား… If my comment is wrong, pls bare with me. Thks
Layma, on August 16, 2007 at 1:18 pm said:
ဂျစ်တူး - gyit_tu, on August 16, 2007 at 2:06 pm said:
Layma, on August 16, 2007 at 2:43 pm said:
အဲဒီ ကုလားလေးဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ပသီမင်းသားတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်…ရှင်…..။
သန့်ဇော်မင်း, on August 17, 2007 at 3:10 am said:
အင်း…. “ကောမန့်” ၀င်ပေးသွားတယ်နော်… 😛
JJ, on August 17, 2007 at 9:37 am said:
JJ, on August 17, 2007 at 10:01 am said:
သမိုင်းဆိုတာ အုတ်ကျင်းနားက, on August 17, 2007 at 3:48 pm said:
မရေးပဲ နေဦးမလို့ပဲ … မျက်စိလည်ရောက်လာမိတာကိုက ကိုယ့်အမှား …. ကိုဂျေဂျေရေ ….
ဆရာကြီး ဦးသန်းထွန်း ကွယ်လွန်သွားတာ ဘာမှ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ အစ်ကိုရေးလိုက်တာ ဖတ်ပြီး ဆရာကြီးရဲ့ ခပ်ပြတ်ပြတ် အရေးအသားတွေကို သတိရမိတယ်။ သူရှိရင် ကောင်းကောင်းဆဲလိမ့်မယ်ဗျ …. ထားပါလေ ။ ကိုဂျေဂျေ … လူမင်းရိုက်တဲ့ ကားကို ကြည့်ပြီးပြီလားဗျ …ကြည်ဖြူသျှင်တို့ ကြည်စိုးထွန်းတို့ ရိုက်တဲ့ ကျန်စစ်သားကိုရော ကြည့်ပြီးပြီလား ….. အတုယူမှားမယ် … မကြည့်နဲ့ … နတ်ကတော်တွေသာ မေးကြည့် …. အဲ ….. မှားလို့ ….. စာအုပ်တွေလှန်ဖတ် … အဲဒါကောင်းမယ် …..
အပေါ်က စာအတိုင်းဆို ကိုဂျေဂျေ အသက်မငယ်တော့ဘူးထင်တယ်ဗျ ….. အေးဗျာ …… အသက်က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး ….. ထားပါလေ ။
အစ်ကိုပြောတဲ့ ချစ်ဦးညို ရဲ့ မင်းဒသ ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးဗျ ……. လင်္ကာဒီပ ချစ်သူ များလား ? မြန်မာ့သမိုင်း ၊ အတွေးအခေါ် ၊ ပထမဆုံး ပြောင်းလဲ ၊ ………… မပြောတော့ပါဘူးဗျာ …….
JJ, on August 18, 2007 at 3:03 pm said:
JJ, on August 18, 2007 at 4:23 pm said:
Layma, on August 20, 2007 at 1:26 pm said:
ေ၈ျေ၈ျ, on August 21, 2007 at 6:02 am said: